DR.Clean Water Purifier Model Contest Form
1. အသက် ၁၈ ပြည့်ပြီး ၃၀ ထက်တော့မကျော်ရပါ။ အိမ်ထောင်ရှိလဲရပါတယ်။
2. အရပ်လေးလဲပြည့်မှီပြီးတော့ ရုပ်ရည်လေးလဲချောမှပေါ့ဗျာ အခြားပြိုင်ပွဲတွေ အခြားMedia တို့မှာသုံးထားတဲ့ပုံတွေတော့ လက်မခံပါဘူး။
3. ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံတွေကို ပြင်လို့တော့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ Natural ဗူးသီး မဟုတ်ပဲ သဘာဝမကျတဲ့ အပြင်အဆင်တွေတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့ဗျာ…
အဲ..ပြီးတော့ ယှဉ်ကျေးမူ့နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ ပုံအလန်းကြီးတော့လက်မခံဘူးနော်..
4. ပြိုင်ပွဲဝင်မည့်သူကိုယ်တိုင်လဲ DR.Clean Water Purifier Page ကို Like And Share ထားရပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် Photo ကို Share တဲ့ အခါလဲ DR.Clean Water Purifier Page ကို Likes And Share လေးလုပ်ဖို့ပါရေးပြီးတော့ Share ပေးပေါ့ :P
5. Like And Share မှာ မသာမူ့တွေပါလာရင်ဖြစ်ဖြစ် Fake Likes or Auto Likes တွေပါလာရင်တော့ ပြိုင်ပွဲကနေထုတ်ပယ်ပါမယ်.ပြိုင်ပွဲဝင် Photo တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ ကြည့်နေမှာပါ။
6. အငြင်းပွားစရာပြသနာတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ DR.Clean Water Purifier ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်ဖြစ်မှာပါ။
အောက်ပါ မေးခွန်းများကို အပြည့်စုံဖြည့်ပေးပါ။
ယခင်ပြိုင်ပွဲ အတွေ့ကြုံ *
ရှိလျှင် Link ရေးပါ
သင့်ပုံကိုပြိုင်ပွဲတွင် အသုံးပြုခွင့် *
ဥပမာ - ၆လအတွင်း
အိမ်အမှတ် ၊ လမ်း
မိမိတစ်ယောက်ထဲ ပါသော ပုံစံမတူတဲ့ ပုံနှစ်ပုံ။ ဥပမာ Selfie နှင့် ကိုယ်လုံးအပြည့်ပုံ